Keylor Navas oo fariin muhiim ah u diray tababaraha kooxda Real Madrid Santiago Solari - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
January 10, 2019 at 19:37 Keylor Navas oo fariin muhiim ah u diray tababaraha kooxda Real Madrid Santiago Solari2019-01-10T19:37:53+00:00 CAYAARAHA
(Real Madrid) 10 Jan 2019. Goolhaayaha kooxda Real Madrid Keylor Navas ayaa farriin muhiim ah u diray tababare Santiago Solari, taasoo ku aadan in qaab ciyaareedkiisa la qiimeeyo marka uu haysto fursad uu kaga soo muuqdo Los Blancos.
Keylor Navas ayaa qaab ciyaareed fiican ku hor sameeyay kulankii ay xalay ku wada ciyaareen kooxda Leganes tartanka Copa del Rey, kaasoo Los Blancos ay guul ku gaartay 3-0, waxana la filayaa in fursad loo siin doono kulanka soo aadan ee Real Betis, sababa la xiriira inuu dhaawacan yahay goolhaaye Thibaut Courtois.
Navas ayaa carabka ku adkeeyay inuusan marna ka quusan doonin dagaalka uu kula jiro Thibaut Courtois si uu u helo booska koowaad, wuxuuna ka codsaday tababare Santiago Solari, inuu qaato qaab ciyaareedka fiican uu bixinayo kulamada uu kasoo muuqdo kooxda.
“Maalinta aan u maleeyo inaan ciyaari Karin, waxaan dib ugu laabtaa gurigeyga, waxaana bilaawaa waxyaabo kale, waxaan mar walba ka shaqeeyaa inaan kulan kasta ku soo bilaawdo, waxaa jira qof go’aanka gaara, waana inaan si adag u shaqeynaa”.
“Ugu danbeyntii, go’aannada waxaa sameynaya tababaraha, hada uma ciyaaro sida aan doonayo, laakiin marka aan helo fursad aan shaqo fiican ku qabto, waa inaan qiimeynaa”.
“Waxay ila tahay inaan halkan sii joogi karo sanado badan, cidna ma oga waxa dhici doona mustaqbalka, laakiin waxaan isku dayayaa inaan ku noolaado waqtigan, iyo joogitaanka kooxda Real Madrid”.
« Dab Caawa ka kacay suuqa Bakaaraha
Mourinho oo ugu dambeyn ka baxay aamusnaanta si uu kaga hadlo wararka loola xiriirinayo kooxaha Real Madrid iyo Inter Milan »